सरकारले विकासको प्राथमिकता छुट्याउन सकेन : नेता पौडेल – नेपाल न्युज डट प्रेस
Home > राजनीति > सरकारले विकासको प्राथमिकता छुट्याउन सकेन : नेता पौडेल
२६ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०८:५८
नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानअन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले विकासको प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको बताएका छन् । तनहुँ जिल्लामा सञ्चालित पहिलो चरणको एक महिने कार्यक्रमको शनिबार दमौलीमा समापन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकार कुहिरोको कागजस्तै भएको आरोप लगाएका हुन् ।
काङ्ग्रेसको नीतिले गर्दा मुलुक आज यो अवस्थामा आइपुगेको नेता पौडेलले दाबी गरे। गाउँमा नै बसौँबसौं बनाउने काङ्ग्रेसको अभियान अझै पूरा हुननसकेको बताउँदै उनले गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्न सके मानिस गाउँबाट पलायन नहुने विचार राखे ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले देशको नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम पार्टीको रुपमा काङ्ग्रेस पुनःजीवित हुने दाबी गरे । जनतालाई साथमा लिएर काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलन शुरु गर्ने बताउँदै पौडेलले त्यसका लागि जनता जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको बताए ।
‘दोस्रो चरणको अभियान प्रचारमुखी होइन, सङ्गठनमुखी हुनुपर्छ, तल्लो तहदेखि नै काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउने सशक्त अभियान दोस्रो चरणमा आउँदैछ’, पौडेलले भने।
वैशाख २५ गतेदेखि शुरु भएको जागरण अभियानअन्तर्गत तनहुँका दश स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
समाजबाद उन्मुख दिसातिर अगाडी बढेकाले दंगालीकाे सुखकाे दिन सुरु भयाे – महरा / नेपाल न्युज
‘बालुवाटार बेच्नेले सिंहदरबार पनि बेच्लान्, होसियार!
थुनामा रहेका पत्रकार गिरी रिहा
घुस रकम सहित आमा-छोरी पक्राउ
नेपाल-भारतबीच बहुप्रतिक्षित ऊर्जा बैठक पोखरामा शुरु
नेकपाको जनवर्गीय संगठनको एकता कहिले होला ?
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेकपाबाटै ओलीमाथि उठेका पश्न
बारामा फेरी असिना पानीसहित हुरी, बालीनालीमा ठूलो क्षति
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृहलाई बुझायो क्षतिको प्रारम्भिक विवरण
तामाङहरुले भोली सोनाम लोसार भव्यरुपले मनाउने तयारी , सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा ।